XOG: Ra’iisul Wasaare Rooble oo Bashiir Goobe geynaya xarunta Hay’adda NISA – Idil News
XOG: Ra’iisul Wasaare Rooble oo Bashiir Goobe geynaya xarunta Hay’adda NISA
Warar hoose aan helnay ayaa sheegaya in Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu qorsheenayo in kormeer shaqo ku tago Xarunta Hay’adda Nabad Sugida iyo Sirdoonka Qaranka ee kuyaala guriga Habar Khadiijo.
Rooble ayaa la sheegay ujeedka uu u tagayo xarunta Nabad Sugida in ay tahay sidii uu u geyn lahaa taliyaha cusub ee NISA Janaraal Bashiir Goobe uu labo maalin kahor xilkaasi si KMG ah ugu magacaabay.
Janaraal Bashiir Goobe ayaa tan iyo markii xilkan loo magacaabay aysan usuurto gelin in uu tago xarunta NISA maadaama khilaaf ka jiro magacaabistiisa uuna diiday Madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhamaaday ee DFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Wareegto uu xalay soo saaray Farmaajo ayuu sidoo kale ku magacaabay taliye cusub oo yeelaneyso Hay’adda NISA taa oo xaalada uga sii dartay, waxa ayna hada ciidamada NISA leeyihiin labo taliye ay kala magacaabeen Farmaajo iyo Rooble.
Waxaa jirta cabsi laga qabo in Ra’isul Wasaare Rooble iyo taliyaha uu magacaabay ee Janaraal Bashiir Goobe loo diido in ay tagaan xarunta NISA maadaama wali Hay’adadaasi awood ku leeyihiin Farmaajo iyo Fahad Yaasiin.
Ciidamada NISA uu isbadal ku sameeyay Fahad Yaasiin ayaa u badan saraakiil isaga uu shaqada geeyay si toos ahna ugu xiran uguna amar qaata taa oo keeneysa in Bashiir Goobe si fudud uusan shaqada ugula wareegin.